Jurgen Klopp Oo Tababaraha Xulka England Ku Dhaliillay Qaabka Uu Ciyaartoyda U Xusho - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaJurgen Klopp Oo Tababaraha Xulka England Ku Dhaliillay Qaabka Uu Ciyaartoyda U Xusho
Jurgen Klopp Oo Tababaraha Xulka England Ku Dhaliillay Qaabka Uu Ciyaartoyda U Xusho
Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa dhalliilay macallinka xulka qaranka England ee Gareth Southgate oo uu saluugay qaabka uu ciyaartoyda u xusho.
Southgate ayaa kulamadii isreeb-reebka Koobka Adduunka ee labadii toddobaad ee u dambeeyey waxa uu ka reebay difaaca midig ee Liverpool ee Trent Alexander-Arnold, taas oo u cuntami weyday Klopp.
Alexander-Arnold oo ay da’diisu tahay 22 jir oo xilli ciyaareedkan dhibaatada bandhigga liita la wadaaga kooxdiisa ayaan qayb ka ahayn liiska ciyaartoyda England ee kulamadii San Marino, Albania iyo Poland ee isreeb-reebka Koobka Adduunka, waxaana hadda la sheegayaa in ay suurtogal tahay in laga reebo tartanka Euro ee bisha June.
Laacibkan ayay xilli ciyaareedkan iskugu darsameen fayraska korona oo ku dhacay iyo dhaawac soo gaadhay bishii November, waxaase uu Jurgen Klopp saluugsan yahay sababta uu Gareth Southgate u xulan waayey laacibkan.
Klopp oo la hadlayay warbaahinta ka hor ciyaarta Arsenal ee caawa ayuu yidhi: “Aad ayaan ula yaabay markii xulka looga yeedhi waayey Alexander-Anrold. Anigu qorshahaba kumaan darsan dhamaan in arrintani dhacayso. Waxa aanu yeelanaa kulan marka ciyaartoyda looga yeedho xulalkooda ee ay qaramadooda u tegayaan, Trent na wuxuu ku jiray ciyaartoydaas. Layaab ayay igu noqotay markii aan arkay in aanu ku jirin xulka.
“Waan ixtiraamayaa Gareth go’aamada uu qaatay laakiin maan fahmin sababta uu uga reebay Trent Alexander-Anrold labadii xilli ciyaareed ee u dambeeyey.”